Ku kalsoon Madaxweynaha Jamhuuriyadda Talyaaniga - Maarso adduunka
Home » Noticias » Qoraalada saxaafadda » Ku socota Madaxweynaha Jamhuuriyadda Talyaaniga
Ku socota Madaxweynaha Jamhuuriyadda Talyaaniga
28 / 05 / 2020 28 / 05 / 2020 by Antonio Gancedo
Laga soo bilaabo gudiga hormarinta talyaaniga ee bisha marso ee nabada iyo xasiloonida ilaa madaxweynaha jamhuuriyada talyaaniga
May 27 ee 2020
Mudane Mudane Madaxweyne
Mudane Madaxweyne, sanadkii ugu dambeeyay ee Maalintii Jamhuuriyadda wuxuu cadeeyay in “aag kasta oo xorriyadda iyo dimuqraadiyadda aysan la jaan qaadi karin kuwa hurinaya colaadaha, iyadoo si joogto ah loo raadinayo cadow si loo aqoonsado.
Kaliya wadada wada shaqeynta iyo wada hadalka ayaa ka gudbi karta isbarbardhiga, iyo
kor u qaadaan danaha wadaagga ah ee bulshada caalamiga ah ”.
Wadahadalka iyo iskahorimaadka ilaa iyo qoraalkiisii ​​ugu horreeyay ee 2009 wuxuu ku socday wadadiisa, sidoo kale wuxuu ka yimid World March for Peace iyo shuban, oo uuraysan oo ay isuduwe ka yihiin Rafael de la Rubia oo ka tirsan ururka "World aan Dagaal iyo Dagaal la'aan", iyadoo ay ka soo qaybgaleen dad, ururro iyo hay'ado ka kala socda lixda qaaradood.
Daabacaadii labaad ee World March ayaa ka bilaabatay magaalada Madrid markay ahayd Oktoobar 2, 2019, Maalinta Adduunka
Qaramada Midoobay ee Rabshad-diidka iyo waxay ku dhammaatay 8-dii Maarso, Maalinta Haweenka Adduunka, oo ku taal magaalada Madrid. Horumarkeeda, mowduucyo kala duwan ayaa taabtay:
hirgelinta deg degga ah ee Hubka Nukliyeerka, si loo xoreeyo kheyraadka loo qoondeeyay
burburin iyo qanacsanaanta baahiyaha aasaasiga ee bini-aadamka;
in dib loo helo Qaramada Midoobay iyada oo laga qaybgalayo bulshada rayidka ah, si loo dimoqraadiyo golaheeda
in loo beddelo Golaha Nabadda Adduunka, lana abuuro Gole Amni
Deegaanka iyo dhaqaalaha;
dhisida shuruudaha horumarka dhab ahaan waara ee meeraha;
dhexgalaan wadamada soonaha iyo gobolada, oo qaataan nidaamyada dhaqaalaha si loo hubiyo wanaagga
looga gudbo dhammaan noocyada takoorka;
u dhaqan-xumeyn dhaqan xumo sidii dhaqan cusub, iyo Rabshado Firfircoon oo ah hab ficil.
Dunida Maarso sidoo kale waxay laheyd laga bilaabo Oktoobar 27 ilaa Noofambar 24, 2019 marin badda oo ah meel nabad ah oo ka madaxbanaan hubka hubka nukliyeerka, kuna saleysan Baaqa Barcelona (1995).
Gudiga Talyaani ee u ololeynta World March ee Nabada iyo Xasiloonida ayaa qasbay in dib loo dhigo marinka wefdiga caalamiga ah sababtoo ah Covid19, laakiin magaalooyin badan ayaa sidoo kale laga bilaabay mowduucyo ku saabsan mawduucyada Maarso.
Sannad-guuradii 74aad ee dhalashadii Jamhuuriyadda, waxaan mar labaad dib u xaqiijinaynaa sida ay nooga go'antahay ujeeddooyinka, sida lagu soo sheegay Abriil 1 ee bayaankii caalamiga ahaa ee u hoggaansanaanta codsigii Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay António Guterres: “In khilaafaadka oo dhami joogsadaan, in si wada jir ah diiradda looga saaro dagaalka dhabta ah ee nolosha ”.
Dukumentiga Rafael de la Rubia wuxuu ku dhawaaqayaa in “intii lagu guda jiray socdaalkii ugu dambeeyay adduunka, waxaan aragnay in dadku ay rabaan nolol sharaf leh, naftooda iyo… kuwa jecel. Bini aadamku waa inay bartaan wada noolaashaha iyo is caawinta midba midka kale. Mid ka mid ah masiibooyinka aadanaha waa dagaallo, kuwaas oo burburiya wada-noolaanshaha isla markaana mustaqbalka u dhow jiilka cusub ”
Gudiga Horumarinta Talyaani wuxuu taageeraa rafcaanka la sameeyay tan iyo markii uu muuqday muuqaalka 'Covid-19'
in loo wareejiyo kharashaadka milatariga si loo taageero caafimaadka, saboolnimada, deegaanka, iyo waxbarashada. Xusuusnow hindisaha hindisaha muwaadiniinta ee wali ku jira Baarlamaanka, sameynta iyo maalgelinta waaxda difaaca madaniga ah ee aan hubeysneyn iyo rabshadaha, oo lagu dardargelinayo olole wacyigelin ah kaasoo aruuriyay kumanaan saxiixyo ah oo ku baahsan waddanka oo dhan.
Waxaan sidoo kale soo bandhignay welwelkeenna ku saabsan qatarta ka dhalatey bilahaan faragelinta
dijitaalka ah ee xorriyadda shaqsiyeed sidoo kale iyada oo loo marayo shabakadda 5G.
Maalinka maanta oo ah xuska, oo ahmiyad weyn u leh dalka xilligan xasaasiga ah, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad dammaanad u siiso Dastuurku annagoo ku qancinayna in la joogo (hadda) in la qaado tillaabooyin la taaban karo oo loogu talagalay wanaagga qof kasta iyo qof walba iyo in Ilaalinta deegaanka.
Jiilalka cusub, kuwa ay badanaa u jeestaan, sida khudbaddii ugu dambeysay ee xasuuqii Capaci, ma rabno inaan ka tagno adduunyo sida aan maanta ku nool nahay. Waxaan aaminsanahay Talyaaniga
waa inay hub ka dhigis ka dhigtaa meel muhiim ah oo siyaasadeeda iyo dhaqaalaheeda waafaqsan dastuurka. Tallaabada ugu horreysa waxay noqon doontaa ansaxinta waqtiga ku habboon ee Heshiiska Qaramada Midoobay ee Mamnuucidda Hubka Nukliyeerka, kaasoo annaga aad noo taabanaya sababta oo ah joogitaanka 70-ka dagaal ee nukliyeerka ee saldhigyada Aviano (Pordenone) iyo Geed (Brescia), aaladaha burburka. caalami ah hadda ku socda wadada casriyeynta. iyo jiritaanka Talyaaniga ee 11 dekedood oo nukliyeer militari ah: Augusta, Brindisi, Cagliari, Castellammare di Stabia, Gaeta, La Maddalena, La Spezia, Livorno, Napoli, Taranto iyo Trieste.
Iyada oo ku saleysan Qodobka 11-aad ee dastuurka, waxaan kaa codsaneynaa inaad si dhaqso leh wax uga qabato arrimaha soo socda iyadoo la eegayo suurtagalnimadaada dastuuriga ah iyo waajibaadkaaga, u huray qarashaadka milatariga, ka bixitaanka ciidamada qalabka sida ee Talyaanigu howlgalka dastuuriga ah ee aan sharciga ahayn. , iyo xiritaanka qaabab militari oo shisheeye oo loo siman yahay Talyaaniga.
Amiirkiisii ​​hore ee Sandro Pertini wuxuu taageeray Talyaaniga oo nabad u horseeday adduunka: “haa madhan kaydadka dagaalka, isha laga helo dhimashada, isla markaana buuxiyo meerayaasha, oo ah isha nolosha ee malaayiinta xayawaan ee la dagaallama gaajada. Tani waa jidka nabdoon ee ay tahay inaan raacno. "
Halkee ay ka jiraan qaab dhismeedka dagaal, kaymaha ayaa u baahan doona inay koraan (miyaynu dooneynaa iyaga inay koraan?) Si loogu deeqo oksijiin, dad aad u tiro badan ayaa lumay intii lagu guda jiray aafo faafa iyo inaan sidoo kale u baahan nahay inaan kobcinno riyooyin, oo aan u aragno inay ku barbarayaan nolosha qarniyada nasiibka, kuwaasoo baahi weyn u qaba goobo dhaqan.
Iyada oo leh himilooyinkeena ugu wanaagsan.
Guddiga Horumarinta Talyaani ee Bisha Maarso ee Nabadda iyo Xadgudubka
Bayaan ku saabsan xaaladda faafa
+ Nabada + Rabshadaha - Hubka Nukliyeerka
1 faallo ah "Madaxweynaha la qadariyo ee Jamhuuriyadda Talyaaniga"
29 / 05 / 2020 at 17: 25
Wanaagsan waan sugi doonaa si aan uga bilowno Colombia waxaan ku dari karnaa tan iyo markii aan ku ruxanno isla dareenka raadinta Nabadda, maahan dagaal, ma ahan bambooyin atom, ma aha nooc kasta oo rabshad ah. Dunida 1da iyo 2da Maarso waxay ku reebtay dariiqoodii weynaa dareenka Dhismaha adduun cusub iyo mustaqbal furan. Inbadan oo naga mid ah ayaa wanaagsan oo waxaan dooneynaa isbedel caalami ah. Nabadda, Xoogga iyo Farxadda. Ceciu
CINEMABEIRO ayaa si rasmi ah loogu soo bandhigay A Coruña
Waraaq furan oo ah taageerada TPAN
© 2020 Horumariyay Suuqa 4P
Dib ugu noqo